आज मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, हाेला त कुलमान र बामदेवबारे निर्णय ? - नेपालबहस
आज मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, हाेला त कुलमान र बामदेवबारे निर्णय ?
| १२:४८:४२ मा प्रकाशित
२९ भदाै, काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषदकाे नियमित बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँझ पाँच बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका हुन् । आज बस्ने बैठकमा कुलमान घिसिङ र बामदेव गौतमबारे निर्णय हुनसक्ने बताइएकाे छ ।
आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्तिको लागि प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भइसकेको छ । प्रचण्ड कुलमानलाई दोहोर्‍याउने पक्षमा रहेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रुची नदेखाएको स्रोतको दाबी छ।
कुलमानको चार वर्षे कार्यकाल भदौ २८ गतेदेखि सकिएको छ। लोडसेडिङ हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै सर्वसाधारणबीच कुलमानको लोकप्रियता बढ्दो छ । त्यस्तै, आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक शाहलाई कोरोना पुष्टि १ दिन पहिले
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको स्पष्टीकरण, मैले कसैलाई ‘पाखे’ भनेको छैन ! ४ दिन पहिले
किन चाहियो राष्टियसभा ? ६ दिन पहिले
राष्ट्रसंघलाई सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीयताको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड ६ दिन पहिले
म भ्रष्टाचार गर्दिन र सहन पनि सक्दैन : प्रधानमन्त्री ओली १ हप्ता पहिले